Ngaba kufuneka uyihlawule iMali mboleko yePPP? Kuthekani ngeMali mboleko ye-EIDL? | XperimentalHamid
Emva kwezigulana, abantu abachaphazeleka kakhulu ngabo baqhuba ishishini elizimeleyo kweli xesha lobhubhane lwe-COVID-19. Icandelo lezoshishino lixhalabile kakhulu ngekamva leshishini labo.
Ngokukodwa abo baqala nge-Paycheck Protection Program mboleko. Ukuba ungumnini weshishini elincinci, kuya kufuneka ubuyise imali-mboleko kwi-PPP?
Amashishini amancinci okanye amakhulu sele esokola ukugcina abasebenzi babo kwimirholo ehlawulwayo. Uninzi lwabantu luhlala ngaphakathi. Ukuveliswa kwezinto ezotyiweyo kunye nemisebenzi ngokubanzi eqhubela phambili uqoqosho ukuba lume, oku bekuza kwenzeka.
Ngaba unayo imbuyekezo yemali mboleko yePPP?
Uhlaziyo lwamva nje kwi-PPP Loan
IFomu yokufaka isicelo sokuXolelwa ekuXolelweni
Ndazi njani ukuba yeyiphi na iFomu ekufuneka ndiyisebenzise
Ngaba kufuneka ndibuyise imali-mboleko yam yePPP ukuba akunjalo?
Ndiqinisekisa njani ukuba imali mboleko yam yePPP ixolelekile?
Imigaqo kunye neMeko yePPP yeMali mboleko
Ngaba kufuneka ubuyise imboleko mali ka-EIDL?
Iimeko zokuxolelwa kwemali mboleko ye-EIDL
Urhulumente we-Federal wenza i $ 2 trillion CarES Act waba ngumthetho. Le phuli yemali iya kusetyenziswa ukubonelela ngoncedo lwemali kubantu, amashishini, kunye neentsapho ngezi ntsuku zinzima zokungaqiniseki kunye nokudodobala koqoqosho.
Ukuba uboleke imali ngeNkqubo yokuKhuselwa kwe-Paycheck, ekwabizwa ngokuba yi-PPP, ungakulungela ukufumana isikimu semali mboleko yokuboleka. Ukuze ufumane oko, kuya kufuneka ugcwalise iphetshana lesicelo kwaye ulingenise.
Ngokwinguqulo ehlaziyiweyo yale phakheji, iimfuno zokuxolelwa kwemali mboleko ye-PPP zihlaziyiwe. Oku kubandakanya ukwandiswa kwexesha eligqithisiweyo kwiinyanga ezintandathu.
Ukuncitshiswa kwemali-mboleko esezantsi ekufuneka ichithwe ekuhlawuleni ukuya kuma-60%. Kwaye kuncitshiswe iimfuno zokugcina amanqanaba abasebenzi kunye nembuyekezo.
Ngaphantsi kwesenzo, i-PP ivumela ukuya kuthi ga kwiibhiliyoni ezingama-349 zeedola kwimali mboleko ethembekileyo kumashishini amancinci. Apha, ishishini ngalinye linokufaka isicelo semali mboleko ye-PPP ephindwe kabini kumvuzo wabo wenyanga wokuhlawula, ukuba nje inani alizukuwela ixabiso lezigidi ezili-2.5 lezigidi kwishishini ngalinye.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba yonke imigaqo-mboleko ye-PPP iya kuba yinto efanayo kuye wonke umntu. Oku kuthetha ukhetho olunye lokusilela, amaxabiso afanayo, kunye neemeko ezifanayo zokuxolelwa kwemali mboleko.
Unondyebo ukhuphe ingxelo entsha yesicelo sokuxolelwa imali mboleko ye-PPP malunga nenyanga ephelileyo. Ubuncinci iinguqulelo ezimbini zesicelo kwifom endala ezalisekileyo kunye nefom entsha enesihloko esithi Fom 3508EZ.
Ngala manyathelo unokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi na.
Ungumntu oziqeshayo kwaye awunabasebenzi. Okanye
Awuzange unciphise imivuzo okanye imivuzo yabasebenzi bakho ngokungaphezulu kwe-25% kwaye khange ulinciphise inani okanye iiyure zomsebenzi zabasebenzi. Okanye
Ukhe weva umsebenzi weShishini oncitshisiweyo ngenxa yemiyalelo ekhutshwe ngokunxulumene ne-COVID-19 kwaye akazange anciphise umvuzo okanye imivuzo yabasebenzi bakho ngokungaphezulu kwe-25%.
Ukuba awubikho kolu luhlu lungasentla, kufuneka ugcwalise kwaye ungenise isicelo sokuxolelwa ngemboleko mali ka-PPP.
Oku kuxhomekeke kwindlela ojongana ngayo nale meko kuqoqosho olugqubayo. Kwikamva elingaqinisekanga kwelinye icala uboleke imali kwaye akafuni ukusilela kwimali mboleko yakho. Umthetho oyilwayo wenzelwe ukukhusela imisebenzi kunye namashishini eMelika. Ukunika abantu abashishini ukuba bathembise kuninzi.
Ukuba ugcina amanqanaba akho engaphambi kwe-COVID-19 amanqanaba okuqeshwa (okanye aqeshise kwakhona) amanqanaba nembuyekezo. Chitha imali kwiindleko ezivunyiweyo. Ke imali mboleko yakho yePPP iya kuxolelwa. Oku kuthetha ukuba akusayi kufuneka uphinde uyihlawule imali umbolekisi.
Ukuba uqinisekisa la manyathelo alandelayo. Apho umi ithuba eliqinisekileyo lokuba ityala lakho lisuswe egxalabeni lakho. Oku kubandakanya
Sebenzisa imali yeendleko ezifanelekileyo kuphela
Gcina okanye uhlengahlengise inqanaba labasebenzi libe kumanqanaba aphambi kobhubhane
Musa ukunciphisa umvuzo okanye imivuzo ngaphezulu kwe-25%
Gcina ingxelo yento nganye eyenziweyo kwishishini
Buza umbolekisi wakho malunga neemeko kunye neemeko zokuxolelwa kwimali mboleko, kwaye uhlangane nazo
Faka isicelo soxolelo loMboleko-mali
Okulandelayo yimiba kunye neemeko zePP Loan
Izinga lenzala le-1%
Ukuvuthwa kweminyaka emi-2 (inani leenqununu ezingenakuthetheleleka kunye nenzala ethe yafunyanwa ngexesha le-5years, le yayiyi-2 iminyaka ngaphambili]
Utyeshelo lweenyanga ezintandathu
Isiqinisekiso se-100% yi-SBA
Akukho ntlawulo kumbolekisi okanye kulowo ubolekayo kufuneka ahlawulwe kwi-SBA
Akukho mfuneko yesiqinisekiso somntu
Akukho mfuneko yesibambiso
Ulawulo lwamashishini amancinci luvumile ukubolekwa kwemali-mboleko yokulimala kwezoqoqosho. Ukuba ngethamsanqa uyifumene imali-mboleko ye-EIDL kwishishini lakho elincinci uya kuba nethemba lokufumana uxolelo kwimali mboleko.
Ngaba kuya kufuneka ubuyise Imalimboleko ye-EIDL? Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke kwezi meko zilandelayo. Kwaye ukuxolelwa kunganxenye okanye kugcwele.
Inkqubo ekhoyo ye-SBA EIDL iqhutywa yi-SBA ngemali evela kurhulumente. Le nkqubo ibandakanya ukuya kuthi ga kwi-10,000 yeedola yemali mboleko engaxolelwayo kunye nokuya kuthi ga kwi-2 yezigidi zeedola mboleko.
Ukuqala kwakho kwi-EIDL yinxalenye yemali mboleko. Ukuba ufumana kwangaphambili kwaye awunikwanga okanye awuthathi i-EIDL, akufuneki ukuba ubuyise imali kwangaphambili.
Ngapha koko, ukuba wamkela i-EIDL, imali mboleko ngokwayo ayinakuxolelwa. Elona candelo lixolelwe kukuhlawulwa kwangaphambili kwemali efikelela kwi-10,000 yeedola.
iindidi Finance Personal tags Ngaba kuya kufuneka ubuyise iMali mboleko ye-EIDL, Ngaba kuya kufuneka ubuyise iMali mboleko yePPP, Ngaba kufuneka uyibuyise imali-mboleko ye-EIDL Post yokukhangela
Ukutshata nosapho lwakhe Isahluko 236 - 240 NovelCat Version
UTikTok unqunyulwa nini e-US?